Bareas de Madagascar : Gros outsider – Malag@sy Miray
Fandresena 4 no 0 hono no azon’ny ekipam-pirenena malagasy nanoloana an-dry zareo Komaoro, tamin’ny lalao miverina. (Mampihomehy fa ny fampahalalam-baovao sasany mitatitra 2 no 0, ny sasany mahita 4 no 1, tsy hay intsony izay tena marina fa ny azo antoka aloha dia nandresy isika ary tafakatra amin’ny dingana manaraka). Tamin’ny lalao mandroso mantsy dia efa nandresy 6 no 2 an-dry zareo tetsy Mahamasina ihany koa isika.
Tafiditra amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao atsy Afrika Atsimo amin’ny 2010 ireo lalao mandroso sy miverina ireo, ary tafiditra amin’ny fifanintsanana amin’ny CAN 2010 ihany koa. Tsara aloha ny mifaly satria nandresy, fa ireto kosa no tokony tsy maintsy hobanjinina:
Ireny lalao savaranonando ireny, dia ekipa 10 ihany no nandray anjara taminy, dia ny ekipa 10 ratsy filaharana indrindra eto Afrika amin’ny filaharana avoakan’ny FIFA tamin’ny jolay 2007. Isan’ny gidany isika satria resy inefatra tamin’ny lalao iraisam-pirenena 4 farana natao.
Manana ekipa 5 i Afrika, ankoatr’i Afrika Atsimo, hiatrika ny fiadiana ny ho tompon-daka eran-tany amin’ny taona 2010. Ny resaka CAN kosa, dia ekipa 15 no hifaninana hiady ny toerana, hanao ny dingana famaranana, raha tsy isaina i Angola mpampiantrano.
Taorian’ny fandresena an’i Komaoro iny, ny dingana manaraka no atao hoe Dingana voalohany. Ekipa 48 mizara vondrona 12, izany hoe 4 avy isaky ny vondrona iray. Ny voalohany amin’ny vondrona no ho tafakatra amin’ny dingana manaraka, miampy ny 8 tsara isa indrindra amin’ny laharana faharoa. voalohany aloha, dia mivavaha mba tsy hisy ekipa hitsoaka an-daharana ny mpiray vondrona amin’i Madagasikara, satria raha vao vondrona misy ekipa 3 dia tsy maintsy manenjika ny ho voalohany, io no fotaka be tamin’ny andiany 2008 teo ho antsika. Ity dingana voalohany ity no tena maozatra amin’ny dingana rehetra hatrehina. Ary raha ny filaharana misy ny ekipa afrikanina dia na aiza na aiza vondrona misy ny Barea, dia ny malagasy no hatao hoe Gros outsider na betongotra. Tsy fanakiviana fa isika izao no hataon’ny ekipa hafa fakana isa, ka izay manao ady sahala amintsika dia hahatsiaro tena ho menatra (toy ny henatra azontsika malagasy raha manao ady sahala amin’i Komaoro na La réunion). Raha maniry ny hampiakatra ny filaharany anefa i Madagasikara dia mila mandresy ny mpifanandrina aminy eo, ary tsy manao resy mihitsy.
Ny dingana faharoa kosa dia vondrona manalasala: Vondrona 5 misy ekipa 4 avy, ka ny atao dia miala gidany mba ho tafakatra hanao ny dingana famaranana ny CAN, satria izay 3 voalohany isaky ny vondrona no ho tafakatra. Ny tanjona faharoa sy lehibe (ary nofinofy lehibe ihany koa) dia ny mba ho voalohany amin’izany vondrona izany, satria izay voalohany isaky ny vondrona ihany no hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany.
Ho ahy manokana dia zava-dehibe amiko ny filaharan’ny ekipam-pirenena, mialoha ny hahatafitana na tsia amin’ny dingana manaraka, ka ny hany fanalahidy dia ny fandresena izay ekipa azo resena aloha, ary ny tsy kivy raha sendra resin’ny mahery noho ny tena. Alao hery ary ry tia tanindrazana isany fa mila antsika ireo mahery fo ireo hanohana azy, na dia kilasian’ny sasany ho Gros outsiders sahady aza… Enga anie mba ho diso ny tenanay fa dia hiaraha-mahita eo ny fizotry ny lalao
Par Dotmg 5 Commentaires
20 novembre 2007 à 6:23
Efa henonareo moa tao anaty gazety TARATRA ilay sangisangy zary tenany :
Nisy olona roa niresaka « Maninona lesy ito alikan’ialahy ity no mitomany valala be ohatra izao a?
– tena resy indray lesy ny Barea dia mitomany valala ohatra io izy a!
– dia tena ohatra izao foana zany rehefa resy ny ekipa malagasy?
– ary hono ho ahy, rehefa maharesy izany ny Barea dia maninona ity alikan’ialahy ity?
– tena tsy haiko lesy fa mbola tsy nitranga izay! »
Dia asa izay nataon’ilay alika tamin’ny Barea naharesy 4 no 0 io…
Ny tohiny dia tafaraka vondrona amin’i Côte d’Ivoire indray ny Baréa. Mifankahita amin’i Didier Drogba indray izany e! Omany indray ny vanille homena an’i Nedala.
I Mozambika sy Botswana no ekipa roa hafa ao anatin’ny vondrona. Maivana aby ny mpifanandrina, ho an’i Drogba mazava ho azy.
Pronostic: fandresena 1, ady sahala 1, faharesena 4 ho an’i Barea mandritra ny lalao 6 hataony, ary ho voakilasy fahaefatra amin’ny mpifanandrina 4.
3 décembre 2007 à 11:37
Malag@sy Miray | Baolina, vehivavy, delestazy jirama ary zavatra hafa koa
faly miarahaba antsika rehetra pamaky aloha e!
amin izao fotoana anoratako zao de mbola misy fanatenana kely ihany ny bareas satria dia 2 eme ry zareo ao aminy groupe 7 misy azy ka aminy 12 octobre zao no hahafatarantsika ny valiny farany ka samia mba mankahery ny ekipatsika daholo e!
ary manatena miracle ho any bareas aza de kivy kosa anefa raha tsy tafakatra fa aoka ankahery foana
29 septembre 2008 à 6:05
hasina> Tsy misy mirakla hantenaina intsony io ka, efa mangorona entana ny malagasy. Ny hany herijika dia sady mandresy ny Ivoarianina isika ary mandresy Mozambikanina ihany koa ny Botsoane. Aleo tsy manantena intsony mihitsy aloha fa, ny amin’ny CAN 2012 no omanina sahady.